About us - Shenzhen Hengxing Impahla Machine Co., ltd.
Isingeniso Sethu Esifushane
Shenzhen Hengxing Impahla Machine Co., ltd. esungulwe ngo-2011, ingumkhiqizi ochwepheshe owenza ucwaningo, intuthuko, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nokusebenza komshini wokugcwalisa ithubhu ye-ultrasonic nokufaka uphawu, ukugcwalisa umshini wokufaka amapayipi, umshini wokugcwalisa i-ampoule we-plasitc, umshini wokupakisha imaski ebusweni, umshini wokuwelda weplastikhi ophakeme kakhulu, i-ultrasonic umshini we-plastic welding, umshini wepulasitiki owenza umshini, umshini wokufaka uphawu lwe-blister, umshini wokupakisha we-shrink, njll.
Imishini yokupakisha kaHengXing isetshenziswa kakhulu ezimonyweni, ekwenziweni kwemithi, ekudleni, epulasitiki nakwezinye izimboni. Iningi lemikhiqizo yethu lithole izitifiketi ze-CE neRoHS.
I-Hengxing izinikele ekuthuthukiseni ubuchwepheshe be-ultrasonic, kuhlanganiswa ubuchwepheshe bokuzenzekelayo nobuchwepheshe be-ultrasonic ngokuphelele emshinini wokufaka uphawu lwe-tube tube, ukunqoba izinkinga zokubekwa uphawu okushisayo kwendabuko, ukwenza ukubekwa uphawu okucocekile nokuqinile. Ngomzamo oqhubekayo wethimba lethu lobuchwepheshe, sithole izinombolo zezitifiketi ze-patent, ezihola izitayela zobuchwepheshe be-ultrasonic emishinini yokupakisha neyokushisela.
I-Hengxing, neqembu elinentshisekelo nelinolwazi, ihlala itholakala ukuze ihlaziye izidingo zakho futhi ikunikeze izixazululo eziphumelela kakhulu bese ubuyela kuwe ngesikhathi. Eminyakeni yamuva, inkampani yethu ithuthukise umshini weshubhu ekamelweni eliphambili, i-monodoze tube umshini ne-plastic ampoule yokugcwalisa nokufaka uphawu embonini yezimonyo. I-Hengxing ihlala ilandela eduze nenkambiso yemakethe.
I-R & D yethimba elinamandla, izinqubo eziqinile zokuhlola, okwenza imishini ikhwalithi ephezulu.
Kuhle kakhulu ekwenzeni ingxenye yomshini, ezinikele ngayo yonke imininingwane, okwenza imishini izinzile.
Ukuletha ukuqinisekiswa nokuzuza, gcina amakhasimende anelisekile emsebenzini wethu.